Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Cagaf Cigaal Cagaf | Shiinaha Pet Warshadda ciddiyaha Clipeer
Bisad Claw Ciddi Clipper
1. Mashiinka waara ee bisada yar yar ee ciddiyaha gooyuhu waxay ka samaysan yihiin bir bir ah oo tayo sare leh, waa awood ku filan oo lagu jarjarayo ciddiyahaaga bisihiisa iyadoo la gooyo kaliya.
2. Musbaarka ciddiyaha bisadda ayaa leh quful ammaan oo kaa ilaaliya halista dhaawaca shilka.
3. Ciddiyaha bisadda ciddiyaha gooyuhu wuxuu ka kooban yahay raaxo, qabasho fudud, siibasho la'aan, gacmeedyo ergonomic ah oo si ammaan ah ugu sii jiraya gacmahaaga.
4. Qalabkeena cidiyaha ee fudud ee gacanta ku haya ee loo yaqaan 'ጥፍ' oo loogu talagalay xayawaannada yaryar. Sidoo kale, si fudud ayaa loo qaadi karaa meel kasta oo aad safarto.
Faylka Ciddiyaha Ciddu si ammaan ah ayuu si fudud ugu gaaraa ciddiyaha dhammaaday ee geeska Dheeman. Kiristaalo yaryar oo ku dhegan nikkel ayaa si dhakhso leh u xareeya xayawaanka''s ciddiyaha Sariirta faylka xayawaanka xayawaanku waxay kuxirantahay inay ku ekaato ciddiyaha.
Ahama biraha ahama Trimmer Trimmer
Mashiinka goynta loo adeegsaday farshaxanka bisadayaasheena ciddiyaha ayaa laga sameeyay bir adag oo birta ah si loo hubiyo inay waarayaan & dib loo isticmaali karo sanadaha soo socda.
Bir dahaarka ah ee biraha birta ah ee birta ah waxaa lagu dhejiyaa gacmo xargo ah oo kahortaga siibashada markii aad goosato.
In kasta oo Trimmer biraha birta ah ee birta ah ay doorbidayaan xirfadlayaal xirfadlayaal ah, haddana waxay sidoo kale muhiim u yihiin milkiilayaasha eyda iyo bisadaha maalin kasta. U isticmaal mashiinka yar ee birta ah ee birta ah birta si aad ugu ilaaliso cidiyaha xayawaankaaga caafimaad.
Yar Yar Clipper Cippper
Mashiinadeena miisaanka culus ee ciddiyaha ayaa loogu talagalay in loogu isticmaalo xayawaanka yaryar, sida eeyga yar, bisadaha iyo bakaylaha.
Mashiinka bisadaha yar yar ee gooyuhu wuxuu ka sameysan yahay bir bir ah oo birta ka sameysan sidaa darteed waa hypoallergenic waana waari karaa.
Gacanta mashiinka yar ee bisadaha yar yar ayaa lagu dhammeeyaa daahan warqad caddeyn ah, Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si ammaan ah oo raaxo leh u xajiso si aad uga hortagto shilalka xanuunka leh.
Maqas bisad Xirfad yaqaan
Maqaarka bisadaha xirfad-yaqaannada ah waxaa si khaldan loogu qaabeeyey bir makiinad-bir af leh oo bir-googo'aan bir ah. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto waxaad sameyneyso oo kaa caawinaya inaad go'aamiso inta aad u baahan tahay, waxay ka fogaaneysaa qulqulatooyin dhiig leh xitaa iyada oo aan lahayn dareemayaal deg deg ah.
Maqaska xirfadeed ee bisadaha ciddiyaha ayaa leh gacmo qabasho raaxo leh oo aan sibiibix ahayn Waxay hubisaa sahlanaanta isticmaalka waxayna ka hortageysaa shilalka iyo dillaaca shilalka ah.
Adoo adeegsanaya maqaskan bisadda xirfad-yaqaan ah oo jar cidiyahaaga yar, ciddiyaha, waa badbaado iyo xirfad ahaanba.